fanontaniana CalClassics ....
2 taona 2 andro lasa izay #193 by PAYSON
I namaky sy niraikitra tamin'ny "vakio-ahy" ho Rikoooo i Connie. Tsy fantatro hoe ahoana no afaka manidina izany, ary toa, manao izany tsara. Nandeha tany CalClassics, saingy 2004 rehetra, 2000, ary 98 fiaramanidina. Tsy manidina na inona na inona, fa fsx zavatra, afa-tsy noho ny ady, dia tsara tarehy aho Ubisoft be ny lehilahy. Misaotra ny Info anefa. Tena tiako ny fanampianao. (Ny Electra dia OK)